MyCoolClass | Meel kasta wax ka baro
Buugga Demo Bilaash ah
Maxaad dooneysaa inaad barato maanta?
Safarka & Dhaqanka
Sida wax loo barto!
Baashaal oo baro!
Shaqsi-qof-qof casharo iyo koorsooyin koox kooxeed oo kaliya loogu talagalay carruurta!
Hel macallinka ugu fiican oo leh casharo gaar-ka-gaar ah ama koorsooyin koox xiiso leh oo ku habboon baahida ilmahaaga. Macallimiintayadu waxay fahmaan sida carruurtu wax u bartaan oo ay u siiyaan casharo xiiso leh iyagoo adeegsanaya noocyo kala duwan oo ka mid ah xirmooyinka, boombalooyinka, iyo ciyaaraha.
Haddii ay tahay dhisidda xirfado luqadeed oo xooggan, barashada qalab,
ama abuurista farshaxanka, MyCoolClass ayaa ka caawin doonta ilmahaaga kobcinta xirfadaha looga baahan yahay mustaqbal guul leh.
Ka sokow inay quruxsan tahay, dhammaan macallimiintayadu waa xirfadeed barayaasha iyo khubaro marka wax la baro carruurta.
Fasallada gaarka ah
Qaado casharo gaar-gaar ah oo loo habeeyay si kor loogu qaado kalsoonida iyo hagaajinta xirfadaha luqadda. Macallimiintayadu waxay leeyihiin aqoonta, waayo -aragnimada, iyo qalabyada si ay ilmahaaga ugu mashquuliyaan iyagoo adeegsanaya ciyaaro kala duwan, qalab -bixinno, iyo kuwo kaloo badan.
Ilmahaagu miyuu jecel yahay fanka, dheesha, muusigga, sayniska, ama akhriska? Waxaan dammaanad qaadaynaa inaad ka heli karto koorsada ugu fiican. Fiiri fasalladayada gaarka ah ee mowduucyo iyo maaddooyin kala duwan, wax la barto saaxiibo cusub adduunka oo dhan!
Si ka duwan barnaamijyada kale ee barashada, dhammaan macallimiintayadu waxay si wadajir ah u leeyihiin ururka MyCoolClass.
Shaqaale-iskaashi ahaan, qaabkayaga ganacsi wuxuu soo jiitaa macallimiinta ugu fiican adduunka oo dhan oo buuxiya heerarka ugu sarreeya.
U Hadal Sida Boss
Ingiriis ka fiican
Ingiriisku albaabada ayuu furaa iyo suuqyada!
Aan wajahno. Ingiriisku waa luqadda caalamiga ah ee ganacsiga.
Haddii aad u shaqayso shirkad caalami ah, aad rabto inaad kala duwanaato suuqaaga,
ama aad dibadda u guurto, inaad noqoto qof ku hadla af Ingiriis oo kalsooni leh ayaa ku siinaya faa'ido.
MyCoolClass waxaa ka muuqda macallimiinta ugu aqoonta iyo khibrada badan
oo ka kala yimid daafaha dunida oo ku takhasusay Ganacsiga Ingiriisiga.
Dhammaan macallimiintu waa xirfadlayaal shahaado haysta waxayna bixiyaan casharo shaqsiyeed
iyo koorsooyin xiiso leh oo damaanad qaadaya inay hagaajinayaan xirfadaha wada xiriirka oo dhis kalsooni.
Miyaad ka shaqeysaa warshadaha sida soo dhaweynta ama iibinta iyo suuqgeynta oo ma u baahan tahay inaad ku xiriirto Ingiriisiga? Macallimiinteena Ingiriisiga Ganacsiga ee khibrada leh ayaa kaa caawin doona inaad ku baraarugto jawi caalami ah oo tartan ah.
Caddaynta aqoonta Ingiriisigu waa faa'ido xoog leh oo mararka qaarkood ay u baahan yihiin jaamacadaha iyo loo -shaqeeyayaashu. MyCoolClass waxay leedahay macallimiin ku takhasusay diyaarinta IELTS, TOEFL, imtixaanaadka Cambridge, iyo kuwo kaloo badan.
U -guuridda dibadda
Haddii aad u guureyso Barcelona, ​​Paris, ama Los Angeles, barashada luuqadda maxalliga ah ayaa nolosha u fududayn doonta. MyCoolClass waxay leedahay macallimiin in ka badan 15 luqadood si ay kaaga caawiyaan kobcinta xirfadaha aad u baahan tahay si aad ugu kobcdo waddan cusub.
Buugga A DEMO BILAASH AH TODAY!
Soo hel a Macallimow
Waxaan kuu haynaa macallimiin badan oo tayo leh oo aad ka dooran karto. Eeg astaamaha iyo fiidyowyada si aad u hesho macallin kugu habboon.
Baro markaad rabto. Buug
maalin iyo wakhti ku habboon jadwalkaaga.
Si fudud u gal fasalka oo u oggolow tacaburkaaga barashada!
100% La Xaqiijiyay Barayaasha Xirfadlaha
MyCoolClass kaliya waxay aqbashaa barayaasha ugu aqoonta badan adduunka oo dhan. Dhammaan macallimiintu waa inay dhammaystiraan hannaanka xaqiijinta 4-tallaabo ah oo ay sameeyeen kooxdayada. Macallimiintu waa inay oggolaadaan baaritaanka dambiyada ka hor inta aysan wax ku dhigin madasha. Waxaan dammaanad qaadeynaa in dhammaan macallimiintayadu ay la kulmaan heerarka ugu sarreeya.
MyCoolClass waxay bixisaa tababar horumarinta xirfadeed oo socda si ay macallimiintayada uga caawiso inay noqdaan kuwa ugu wanaagsan ee ay noqon karaan.
2022 MyCoolClass Iskaashatada Xaddidan | Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.
Sida waxa aanu samaynayno?
Ku biir liiska boostada oo la soco wararkii ugu dambeeyay, tabaha waxbarashada, iyo xayaysiisyada marmarka ah. Waad iska bixi kartaa wakhti kasta. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Email Ku qor cinwaanka emailkaaga
Maya mahadsanid, dan kama lihi!
degid maalin 1 The sp_landing waxaa dejiyay Spotify si ay u hirgeliyaan content audio ka Spotify ee website-ka iyo sidoo kale diiwaan macluumaadka ku saabsan isdhexgalka user ee la xiriira content audio ah.
sp_t sano 1 Kukiyada sp_t waxaa dhigay Spotify si ay u hirgeliso nuxurka maqalka ee Spotify ee bogga internetka iyo sidoo kale diiwaan gelisa macluumaadka ku saabsan isdhexgalka isticmaalaha ee la xidhiidha nuxurka maqalka.
KORONTADA 2 sano YouTube-ku waxa uu buskudkan ku dejiyaa muuqaallada youtube-ka ku dhex jira oo waxa uu diiwaangeliyaa xogta tirakoobka ee qarsoodiga ah.
aaladaha yt-fog-ku-xidhan marna YouTube waxay u dejisay buskudkan si uu u kaydiyo dookhyada fiidyaha ee isticmaalaha isagoo isticmaalaya fiidyaha YouTube-ka ku dhex jira.
yt-fog-qalab-id marna YouTube waxay u dejisay buskudkan si uu u kaydiyo dookhyada fiidyaha ee isticmaalaha isagoo isticmaalaya fiidyaha YouTube-ka ku dhex jira.
heerka log marna Sharaxaad lama hayo.